एनआरएन अभियानमा लाग्नेहरु पछाडि फर्कन नपरोस् : यास्मिन बेगम - Rojgar Manch
एनआरएन अभियानमा लाग्नेहरु पछाडि फर्कन नपरोस् : यास्मिन बेगम
सन् २००४ देखि साउदी अरबमा बसोबास गरिरहनुभएका यास्मिन बेगम सैयद अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मध्यपूर्व क्षेत्रिय महिला उपसंयोजकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । महिलाहरुका लागि कठिन मानिएको खाडि मुलुक त्यसमा पनि केही कडा मानिने साउदी अरवबाट एनआरएन अभियानमा अग्रपंक्तिमा देखिनुभएकी बेगम सन् २००७ देखिनै पञ्जिकृत सदस्यका रुपमा यस संस्थामा सक्रिय हुनुहुन्छ । एनआरएन अभियान र मुद्धा सैयदको परिवारमा नै रहेको छ, किनकी उहाँ एनआरएन आइसीसी मानार्थ सदस्य राजु सैयदको जीवनसङ्गिनी हुनुहुन्छ । सदैव साथमा रहने राजुले एनआरएन अभियानमा उहाँलाई अगाडि सारेर खाडीमा महिलाहरु पनि सक्षम छन् भनेर देखाइरहनु भएको छ । खाडीमा रहेका महिला र महिला घरेलु कामदारका विषयमा नजिकबाट जानकार सैयदले एनआरएनका अनेकौ फोरम मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ । एनआरएन अभियानसँग जोडिएका केहि फरक विषयवस्तुसहित उहाँ यास्मिन बेगम सैयदसँग रोजगारमञ्चका लागि फणिन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
तपाई त मुस्लिम समुदायको महिला, यसरी विश्व सञ्जाल भएको एनआरएनएको नेतृत्वमा आउँदा कस्तो अनुभव हुँदोरहेछ ?
मैले मुस्लिम महिला भएर यो पद पाएको होइन बरु मेरो सक्षमताको आधारमा मैले यो मान, सम्मान र स्थान पाएको छु । जाति विशेषको आधारमा नभई मेरो खुवीका कारण तथा सबै नेपालीहरुको माया, साथ र सहयोगको कारण यो स्थानसम्म आइपुगेको हँु । संस्थागतरुपमा यसरी आबद्ध हुन पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । गैरआवासीय नेपाली संघका सम्पूर्ण अग्रजहरुदेखि सबै दाजुभाई तथा दिदी बहिनीलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
खाडी मुलुकमा छोरीमान्छेलाई एकदमै गा¥हो हुन्छ भन्ने कुराहरु आइरहन्छन् । अझ तपाई त साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, यसरी साउदीबाट एनआरएनए मिडिल इस्टको महिला उपसंयोजक पदमा आईपुग्नु त सजिलो छैन होला ?
पक्कै सजिलो छैन तर इच्छा शक्ति हुँदा पुरा नहुने के नै छ र । ममा अहिले खुशीको शब्द नै छैन, अति नै हर्षित छु । आज यास्मिन बेगम सैयद भनेर विश्वभरका एनआरएन साथिहरुमाझ चिनिन पाउनु मेरा लागि ठुलो उपलब्धी हो । त्यसमा पनि खाडी मुलुक मध्ये महिलाहरुको लागि अत्यन्तै गा¥हो देश भनेर चिनिदै आएको साउदी अरबबाट म यो उपलब्धीसम्म पुग्न पाएकोमा धेरै खुसी लाग्छ । मलाई यहाँसम्म आईपुग्न धेरै अग्रजहरुले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ । हरेक काममा साथ सल्लाह र सुझाव उहाँहरुले दिइरहनुभएको छ त्यसको लागि आभार प्रकट गर्ने शब्द नै मसँग छैन ।
खाडि मुलुकमा रहेका नेपाली सामाजिक संघ संस्थाहरुमा महिला सहभागिता कस्तो पाउनुभएको छ नि ?
यस क्षेत्रमा धेरैजसो महिला दिदीबहिनीहरु घरेलु कामदारमा कार्यरत रहनुभएका हुँदा उहाँहरु बाहिर समाजमा सहजै आउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता दिदीबहिनीहरु के–कति छन भन्ने बारे पनि यकिन तथ्यांक हामीहरुसँग छैन । अर्कोतिर अन्य पेशा व्यवसायमा रहनुभएकाहरुपनि संघसंस्थामा जोडिन अफ्ठयारो मानिरहेको अवस्था छ । अन्य मुलुकका एनसीसी तथा आइसीसीमा महिला सहभागिता बढिरहदा यस क्षेत्रमा भने महिलाकै लागि आरक्षित कोटा पुर्ति गर्न पनि असहज जस्तै छ ।
साउदी अरबको कुरा गर्ने हो भने हामीले यहाँ भएका महिला दिदीबहिनीहरुलाई धेरै आग्रह गर्दा पनि त्यति खुलेर संस्थामा आउन चाहँनुहुँदैन । तसर्थ म गैरआवासिय नेपाली संघमा आबद्ध हुनुभएका र आवद्ध हुन चाहनुहुने विशेष गरी खाडी मुलुकमा हुनु भएका दिदी बहिनीहरुलाई खुलेर अघि बढ्नुस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहँन्छु ।
तपाई आफै खाडि मुलुकमा लामो समयदेखि रहदै आउनुभएको छ, यस क्षेत्रमा रहेका महिला कामदारहरुको अवस्था र अवसर कस्तो देख्नुभएको छ ?
यस क्षेत्रमा महिला कामदारहरुका समस्या धेरै नै आएका पक्कै हुन, तर राम्रो अवसरमा पुग्ने र आफ्नै पेशा व्यवसाय गरेर सफल भएकाहरु पनि प्रशस्त छन । विशेषगरी यहाँ घरेलु महिला कामदारहरुमा बढी समस्या देखिने गरेको छ । अहिले नेपाल सरकारले घरेलु काममा आउने नेपालीलाई रोक लगाएपनि उनीहरु अवैध बाटो र च्यानल प्रयोग गरेर आउने क्रम रोकिन सकेको छैन । जसले गर्दा समस्यामा कम हुनु भन्दा पनि थपिदै गएको अवस्था छ । यसका लागि रोक लगाएर भन्दा पनि घरेलु कामदार सम्वन्धी सम्झौता गरेर दूतावासले कस्ता ठाँउमा यस्ता कामदार सुरक्षित हुन्छन भन्ने अध्ययन गरेर त्यस्ता ठाउमा मात्र काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सके धेरै समस्या आफै समाधान भएर जाने थिए । तथापी संस्थागत प्रकृतिका घरेलु कामदार तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुको अवस्था यहाँ राम्रो नै छ ।
एनआरएन अभियानमै लागेका कैयौ अभियान्ताहरु समस्याबाट गुज्रिएको अवस्था पनि छ । भोलि तपाई नै त्यस अवस्थामा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ । के भयो भने एनआरएन अभियानमा लागेका साथिहरु सुरक्षित हुन सक्छन जस्तो लाग्छ ?
एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । यो प्रश्नमा धेरैजनाको ध्यान नगएको पाइन्छ । हामीले संस्थागतरुपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको क्षमता, योग्यताको आधारमा धेरै प्रकारका सहयोग गर्दै आएका छौ । परदेशमा रहेर काम या व्यवसाय गर्दा आरोह–अवरोह अवश्य आउँछ । हामीले संस्थागतरुपमा विभिन्न सामाजिक कल्याणका विषयमा जुन साथ र सहयोग दिदै आएका छौ त्यो अवस्था कहिले नरहन पनि सक्छ । किनभने यो विदेश हो यहाँको कानुनी अड्चनहरुका कारण बेलाबखत अर्थ व्यवस्थामा पनि उतारचढाव आउन सक्छ ।
हाम्रो यस संस्थाकै कुरा गर्दा पनि यस संस्थामा लाग्नुभएका अग्रजहरु र व्यक्तिविशेषहरुलाई यस्तो आरोह–अवरोह आइरहेको छ । जसको कारण उहाँहरु सक्रिय अवस्थामै ओझेलमा पर्नुभएको छ । अब हामीले यस्तो संयन्त्र बनाउन सक्नुप¥यो, जसमा वहाँहरुको योगदानको उचित मुल्याङ्कन होस् । हाम्रो एनआरएनएमा हाल रहनुभएका महानुभावहरुलाई एउटा संयन्त्र बनाऔ, एउटा कोष बनाऔ भन्ने आग्रह गर्न चाहँन्छु । यसो भएमा एनआरएन अभियानमा लागेका जोकोही भोलि अफ्ठयारो अवस्थामा पुगेमा केही सहयोग गर्न सकियोस । म यस विषयमा जोडतोडका साथ कुरा राख्न चाहान्छु र सबैलाई यसमा ध्यान दिन पनि म आग्रह गर्न चाहँन्छु ।
आफ्नो व्यवसायमा डुबेर, फसेर वा कुनै परिबन्दमा परेर यो संस्थामा संलग्न हुन नसक्ने अवस्था आएका साथीहरुलाई फेरी पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
भर्खरै सम्पन्न छैंटौ मध्यपूर्व भेलामा धेरै अग्रजहरु जस्तै उपेन्द्र महतो लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई देख्न पायौ । उहाँहरुको उपस्थिति हाम्रो लागि महत्वपूर्ण थियो । यस्तै केही व्यक्ति विशेषहरुलाई देख्न नपाउँदा दुख पनि लाग्यो । किनभने यस्तो परिचित अनुहारहरु जो यस संस्थाको लागि एकदम लागिपर्नुभएको थियो । उहाँहरुलाई देख्न नपाउँदा मलाई एकदमै खिन्न महशुस भएको थियो । हाम्रा केहि अग्रजहरु समस्याका कारण पनि यस अभियानबाट टाढिइरहनुभएको छ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौ । उहाँहरुको समस्या बुझेर फेरि पनि एनआरएन अभियानमा फर्काउनका लागि हाम्रो संस्थाले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
रोजगारीका क्रममा या व्यवसायका क्रममा आपत–विपतमा परेको खण्डमा उहाँहरुको योगदानको मुल्याङ्कन गर्दै उहाँहरुलाई ऋण सहयोग दिएर हुन्छ वा कुनै अन्य सहयोग गरेर हुन्छ समस्याबाट उम्क्याउन सकियोस् । त्यसकारण यि विभिन्न किसिमका समस्याहरुको लागि हामीले एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्छ जसले विश्वव्यापी रुपमा रहेका एनआरएनको संलग्नताले समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई कठिनाईबाट मुक्ती दिलाउन सकियोस र फेरी उहाँहरुसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकौं । त्यसको लागि म सम्पुर्ण एनआरएनमा हुनुभएका महानुभावहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।
सर्वप्रथम यहाँहरुलाई धन्यवाद । भर्खरै मात्र मध्वपूर्वको छैंटौ क्षेत्रीय भेला समापन भएको छ । यसमा हामीले धेरै सकारात्मक मुद्दाहरु उठाएका छौं । आशा छ यि मुद्दाहरु निकट भविष्यमा अवश्य नै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हकअधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सफल हुनेछ । अन्त्यमा मलाई जुन माया, सद्भाव यहाँहरुले दिनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।